ဈေးတက်ခဲ့ပြီအမရေ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဈေးတက်ခဲ့ပြီအမရေ….
Posted by phone_kyaw on Jun 18, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
အရင်တုန်းက ဘာ့ကြောင့် မြန်မာပြည်က လူတွေဟာ လစာရတာနည်းပြီး သြစီတို့ အမေရိကန်တို့ က လစာရတာများလဲဆိုတာကို ခဏခဏတွေးမိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စီးပွားရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့သင်တန်းကို တက်ဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၆-ခုနှစ်မှာ စီးပွားရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်သင်တန်းကိုသွားတက်တော့ ဆရာက ဒီလိုပြောပါတယ်။
ကျနော်တို့ တာဝန်က ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကို အလုပ်သမားတွေရဲ့ ခေါင်းထဲကို ရောက်အောင်ရှင်းပြဖို့ ၊ ဆွပေးဖို့ လိုတယ်။ ဒါမှ သူတို့ သိမှာပေါ့။ လစာတိုးတောင်းတာတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ တိုးတာင်းတဲ့လစာကလည်း နိုင်ငံခြားနဲ့ ယှဉ်ရင် အရက်တစ်လုံးဖိုးတောင် မရှိဘူး။ အခုကာလမှာ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဖာတစ်ခါချရင် နာရီဝက်ကို ဒေါ်လာ တစ်ရာ့ငါးဆယ်တောင်ပေးရနေတဲ့ခေတ်ရောက်ပြီ…..အမရေ။
နည်းပညာပိုင်းမှာ ၀ိခ် နေတာ များကြီး..
အမှန်တွေ ပြောသွားလို့ …လက်မ ထောင်ခဲ့ပါဂျောင်း …
နည်းပညာ ပိုင်း နည်းစနစ်ပိုင်း အင်ဖလာ ပိုင်း အဲ ..အဆိုးဆုံး
စိတ်ဓါတ်ပိုင်း အကုန် ဖလာ ကျနေသေးပါဂျောင်း…
အ၀ဲယားနက် ပိုစ့် ဖြစ်လို့ … ဗယာကြော် ပါလို့
အိမ်မပိုင်ဒဲ့ စီးဘွားရေး ပညာငင်
မပိုင်လည်း ဘာဖြစ်လည်း ..
အကျိ ပိုင်ရင် ပီးတာပဲ …
အကျိ မပိုင်လည်း ဘာဖြစ်လဲ …
အကျိ ပါပါး ပိုင်ရင် ပီးတာပဲ ….
ဘစ်ဇနက် အက်ဒမင် ဖတ်လာတာ…ပဲ ..အဟိ..
ကိုယ့် အဖေ မချမ်းသာတာ ကိုယ့်အပြစ်မဟုတ်..
ကိုယ့် ယောက္ခမ ဆင်းရဲတာ ကိုယ် ၆၃ မကျ လို့ ဆိုတဲ့ မူဝါဒ ကို စွဲကိုင်ထားတဲ့…
ယောက္ခမ လုပ်ငန်း ၀င် စီအီးအို ဂျင် နေတဲ့
ဆိုင်လားမဆိုင်လားမသိ။ အခုတလောတော်တော်လေးကြော်ငြာဝင်နေပါလား။ မျက်စိတောင်နောက်တောက်တောက်။
ဒီနေ့စာရေးချင်နေတာ ရေးမယ်ကြံလိုက် …ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချလိုက်နဲ့ 
ဒို့ …နိုင်ငံမှာ အခြေခံ လစာတွေ တိုးပြီ…..ဝေးးး…ဟေးးးဟေးးးး
ပျော်တယ် ပျော်တယ် ဒို့ ပျော်တယ်….
အေးး…..အေးး……ပျော်ကြ…..မင်းတို့ ပျော်လေ …..ဘကုန်း (ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ) တွေ
တမ်းချင်း တစ်ပုဒ် ဖွဲ့ ရအောင်။
အောင်စေတဲ့ အောင်စေ …ဝေလေလေ
ဘာမဆို ဘာကိုမှ ချည်တမျှင် အပ်တဖျား…ကြယ်သီးပြားတောင် မရဟေ့…
ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး …ကိုယ့်ကုန် ကိုယ်ထုတ် …. လုပ်ကြတဲ့ ဖာတသန်း
အရင်တခါ စက်ရုံများမှ ….. လွင့်ခါလို့ဘုံပျောက် …. စားလောက်အောင် ဖာခံမှ..
ဒို့ နိုင်ငံကြီး ဟီးဟီးထ…လျှပ်စစ်မီး မြူမှုန်လောက်… ဇုံ…ဆိုတဲ့ စက်မှုရပ်မှာ
မီးစက်ကြီးတွေ ဂျိန်းဂျိန်းချ.. ဒီဇယ်မီး…ထင်းမီးတွေ ဟုန်းဟုန်းလောင်….
တောတွေပြောင်…တောင်ကတုံး….အမှောင်ဆုံး ညဉ့်နက်ထဲမှာ ထိုးကွင်းထ
အလင်းရတဲ့ခါ ငတို့အလုပ်သမတွေက အော်ကြဟစ်ကြ ….
သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် ချိန်ခါမနှေး ….သူ့ အမေတို့ ရဲ့သားတွေမှာ
လာချိန် လ၀က် ပို့ ချိန် တ၀က်…. အားကျမိသလေး..ဟေးဟေး..
ဒို့ ပြည်ကြီးသာ ဒီချိန်မှာ…..
လုံလောက်တဲ့ လျှပ်စစ် အား မရှိ
လုံလောက်တဲ့ အတတ်ပညာသည် မရှိ
၂၄ လမ်း ၂၅ လမ်း စက်ရုံပြန်ထုတ် သူခိုးတန်း အထည်ချုပ် ဈေးကွက် ပြန်တမ်းမှာ
ကြုံကြိုက်တုန်း ၀င် အားပေးမည့်
အခြေခံလစာ ၅၆၇၀၀ ဆိုတာကို မက်မော မိပေမဲ့
ကျုပ် မျက်လုံးထဲမှာတော့ ၅ လစာ ကြိုပေး လုပ်အားခ ပိုသက်သာပြီး လိုကယ်လ် ကုန်ကြမ်း
ရရှိနိုင်မှု နဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အပါအ၀င် အတန်အသင့် ခိုင်မာတဲ့ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့
Infrastructure အပြည့်အစုံ နီးပါးရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ကို လုပ်ငန်းရှင်တွေ ပြေးတော့မှာ
ဒါမျိုး ဟာကျတော့ လူမစည်ဘူး
Zombie တွေလိုပဲလို့……
သွေးစိမ်းရှင်ရှင် နဲ့လက်ကိုပြလိုက် ….ဂတ်..ဂတ်….ဂတ်…နဲ့ 
အညှီများရာ ယင် ပါ ဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ
ဧရာဝတီ အညှီ ၊ မီးထွန်းပွဲ အညှီ ၊ အနောက်ပိုင်း ဒေသ အညှီ တွေ ပြီးရင်
ဒီ အညှီဖက်လည်း လှည့်ကြပါဦး တော်ရေ့ 
အရေးထဲ နှိုင်းစရာရှားလို့ကဘန်းကျော်ရယ်။ဈေးနှုန်း(၁၅၀)ဆိုတာ
ခင်များအတွက်မဆန်းပေမယ့်. ဒီမှာအတွက် ဆန်းကြယ်သဗျ။
အကုန် ဂွတ် တယ် ။ ပေးလိုက် တဲ့ ဥပမာ ကလွဲ လို့။ အပြော မတတ်တော့ ဆဲသလို ? ? ?
anyway, thumbs up for nice post, keep it up Ko Phone Kyaw
ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆူပြောပြီး ဆုံးမပေးလိုက်သလိုပါပဲ။
စိတ်ရင်းကောင်း စေတနာကောင်းလေးကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။
ဟေ့ .. ဘဲကြီး.. bloody ဘန်းကျော်… အစကနေဆုံးခါနီးထိကို လက်မထောင်တယ်ဗျ… အဲ.. နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းကတော့ မအိရွှေစင်ကို အားနာပါရဲ့… ” မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဖာတစ်ခါချရင် နာရီဝက်ကို ဒေါ်လာ တစ်ရာ့ငါးဆယ်တောင်ပေးရနေတဲ့ခေတ်ရောက်ပြီ…..အမရေ။” တဲ့.. ဒီထက်လည်း ယဉ်ကျေးတတ်တာကျလို့…ဟွန့်… ဥပမာကလည်း ရှားသလားကွာ…(၀ါသနာကြောင့်ပဲနေမှာနော်…)
ဆက်လုပ်.. ရဲဘော်ကြီး… လေလုံးကြီးကြီးတွေနဲ့သာ အဝေးကပစ်..တစ်ချက်ချက်တော့ ထိရောက်လောက်တယ်…
ရွှေဇင်ရေ နင်ကြားတယ်နော် ၊
ကဖုန်းကျော်က အလုပ်သ္မားတွေ ကို efficieny ရှိအောင်လုပ်ပေးဘို့ပါတာဝန်ပေးနေပြီဗျား။
ကဖုန်းကျော်ရေသူ့ခမျာလည်း သမဂ္ဂတွေဖွဲ့ဘို့အရေး ဟိုသည်ပြေးနေရရှာ၊နားချိန်တောင်မရပါဗျား။
အစကနေဖတ်ပြီး အော် ကဖုတ်ကျော်လေး အမှန်တွေပြောနေပါလားဆိုပြီး ဖတ်လာလိုက်တာ။ နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်ကြီးကတော့ကြမ်းတယ်ဗျို့။ နာရီဝက် (အချိန်) လေးတောင်ပါသေး :-)
ကိုတောင်ဖက်သားရေ ကဘန်းကျော်တို့ များ မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေရှိတာ
တောင်မှ နောက် signal ပြနေသေးသ ပဗျာ။
အခုကာလမှာ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဖာတစ်ခါချရင် နာရီဝက်ကို ဒေါ်လာ တစ်ရာ့ငါးဆယ်တောင်ပေးရနေတဲ့ခေတ်ရောက်ပြီ…..အမရေ။
ရန်ကုန်မှာလည်း… ဘယ်ဈေးတွေဖြစ်နေလည်း.. သိချင်သား..
အဲလိုဈေးကောင်းဖြစ်နေတာဟာ.. မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို.. စီးပွားရေးအရဆွဲဆောင်နေစေလို့ပဲ..
ဘွဲ့ရစ,ဆရာဝန်မလေးတယောက်ရဲ့. တလ၀င်ငွေနဲ့.. အဲလိုပြည့်တန်ဆာမိန်းကလေးရဲ့.. တရက်ဝင်ငွေက တန်းညှိလာတဲ့အခါ.. လူငယ်တွေမှာ.. အထွေထွေစိတ်ဓါတ်ပျက်ယွင်းမှုဖြစ်စေပါတယ်..
အဲဒီလို အလွယ် ပြောရင် လဲ ရသပေါ့ သူကြီးရယ်။
ဒါပေမဲ့ ရေရှည်မှာ ဆရာဝန်မလေး က သူ့ ဆရာဝန် လုပ်သက် ရလေ သူ့ တန်ဖိုး တက်ပြီး ဝင်ငွေကောင်းလေ။
အဲဒီ ကိုယ်ကိုရင်းပြီး ရောင်းစားတဲ့ မိန်းကလေး က သူ့ လုပ်သက် ရင့်လာလေ တန်ဖိုးကျလေ။
ကံမကောင်းရင် ရောဂါရပြီး လူညွန့်တုံးမှာ။
ခက်တာက အဲဒီလို မျိုး ရှင်းရှင်းလွယ်လွယ် လေးကိုတောင် မတွေးတော မစဉ်းစား တတ်ကြတာ ပြသနာဘဲ။
အဲလို အသိမျိုး မရှိလို့ လဲ ကလေးတွေ က အလွယ်လမ်း ကို အဟုတ်ကြီးမှတ်နေတာ။